Home > Products > Hardware Tools > Mamaritra ny fitaovana > Aluminium Spirit Level
Ny habibiana spitit, ny haavon'ny bubble na ny dingana tsotra dia fitaovana natao hanehoana raha misy horita (horita) na avoitra (lembalemba) ny karazana. Ny karazan-tsirim-pahaizana hafa dia mety ampiasain'ny mpandrafitra, kavina, mpangalatra, mpikaroka, mpanao asa soratra sy milina metal hafa, ary asa an-tsary na horonan-tsary.
Ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny haavony dia nisy vovobonin'ny vera efa voatsodrano kely ary misy diamondra anatiny ao amin'ny teboka tsirairay. Ireo vovobony ireo dia feno vinaingitra feno, matetika ny volonkoditra miloko volombatolalaka na toaka, ka mamela bubble ao anaty tavoahangy. Manana sava-bolana kely izy ireo, ka ny banga dia miorina eo amin'ny foibe, ny taha ambony indrindra. Amin'ny firona kely dia miala amin'ny toerana afovoany ny bala. Raha toa ka tokony hampiasaina amin'ny sehatra ara-batana na amin'ny lafiny iray ny làlan-kery, dia hosoloina ny tavoahangy boribory tsy misy fotony sady misy diamondra kely kely eo afovoany.
Product Parameter amin'ny Aluminium Spirit Level
Volana aluminium + plastika
Afaka miaraka amin'ny solika na tsy misy azy
Toy ny mahazatra, manodidina ny 15-20 andro
Karazan-tsakafo sy fampiharana ny Digital Digital
Ity laharan-dizitaly ity dia fitaovana tena miavaka izay natao ho an'ny fampivoarana haingana sy mora.
1. Fandaharanasan'ny fampiasana nomerika digital: 4x90 ° (0 ~ 360Â °)
2. Famolavolana fampirimana nomerika: +/- 0.01Â ° amin'ny 0 ° ary 90 °; +/- 0.05Â ° amin'ny 1 ° -89 °
3. Famaritana ny fampisehoana nomerika: +/- 0.1Â ° amin'ny 0 ° ary 90 °; +/- 0.2Â ° amin'ny 1 ° -89 °
4. Mametraha diplaoma izay tianao hampitandremana; Feo mihaino eo amin'ny sehatra, miondrika ary mametraka angona
5. 4 Meny fitetezana (° degre /% isan-jato / mm / m / IN / FT)
7. Buzz ON / OFF azo atao
8. Manaova asa mba hanamaivana ny famafazana
9. Kaliteran'ny mpampiasa
10. Fanomezana herinaratra: AA2 batterie AAA
11. Nakatona ny fiara 3 minitra
12. Tempasy miasa: -0 ° C-40 ° C
13. Fanamafisana ny hafanana: -10 ° C-50 ° C
14. Dimension: 66X28X293mm
Fampiharana: famenoana, fampiroboroboana, fanomezana
Fanazavana momba ny Aluminium Spirit
1. Firaketana mahazatra: mihena ny ampahany, 30 pcs isaky ny carton.
2. Afaka manangona araka ny zavatra takian'ny mpanjifa isika, toy ny boaty, kitapo, akanjo maromaro sns ... .. Ny fehezan-teny MOQ dia misy.
Fandefasana:Fitaterana an-dranomasina sy fitaterana an'habakabaka na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.